Caqli, Xiriir Laheyn, Iskutallaabku Wuxuu Ku Socdaa Guud Ahaan! Noocyo Shisheeye oo Cusub Soo Bandhigida Musqusha
Bogga ugu weyn / blog / Caqli, Xiriir Laheyn, Iskutallaabku Wuxuu Ku Socdaa Guud Ahaan! Noocyo Shisheeye oo Cusub Soo Bandhigida Musqusha
2020 / 10 / 06 Qoondayntablog 2497 0
Qeybtii labaad ee sanadka, shirkadaha musqusha ee shisheeyaha ayaa bilaabay alaabooyin cusub. Baahida caafimaadka, shirkado dhowr ah si loo kordhiyo dadaalka cilmi baarista musqusha iyo horumarka, Kohler, iyo ilaa iyo khaanadaha qasabada cusub ee aan lala xiriirin karin, shirkadaha qaar ayaa bilaabay suuli si loo ogaado inta jeer ee alaabada caafimaadka. Intaa waxaa sii dheer, alaabada musqusha waxay muujinayaan astaamo ka weyn xudduudaha, sida isku-dhafka qafisyada musqusha iyo kabadhada ay bilaabeen shirkadaha, shirkadaha qaar waxay ku ciyaari doonaan armaajooyinka musqusha miiska labiska. Laga soo bilaabo alaabtan cusub, waxay umuuqataa in alaabada musqusha ay ka sii kordhayaan tiknoolajiyad heer sare ah isla markaana ay u adeegsanayaan saaxiibtinimo, waxayna ka ciyaarayaan door sii kordheysa nolosha guriga.
Musqusha Caqliga leh
Tuubada Induction Induction Non-Contact
Cudurka neo-pneumonia ee faafa ayaa keenay mowjado cusub oo fursado horumarineed oo loogu talagalay alaabada musqusha ee aan lala xiriirin, sanadkanna Kohler wuxuu sidoo kale bilaabay qasabad caqli-gal ah oo aan lala xiriirin karin, "Mayak Household Sensor Faucet", oo loo isticmaali karo taabasho la'aan taabashada gacmaha, karinta iyo nadiifinta guriga. Iyada oo leh dareemaheeda xasaasiga ah, biyuhu waxay ku soo baxaan mowjad fudud oo gacanta ah, iyo muddada afar daqiiqo ah, waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhaqo gacmaha nidaamka nadiifinta "toddobada tallaabo". Alaabtan fekerka leh sidoo kale waa fududahay in la rakibo, oo leh moodooyin badan oo la heli karo loomana baahna in godad dheeri ah laga sameeyo berkedda, umana baahna in la keydiyo suurtagalnimada adeegsiga muddada dheer ee batari AA5 ah.
Nidaamkan waxaa loo isticmaali karaa dhowr shey oo qasabado ah, dadka isticmaala waxay si toos ah ugu sheegi karaan tuubada inay daarto biyaha, ka dib biyuhu waxay bilaabayaan inay qulqulaan, oo marka la isticmaalayo saabuun, tuubada ayaa si otomaatig ah u demin doonta 20 ilbidhiqsi, ka dibna mar kale daaran 10 ilbidhiqsi markii aad u baahan tahay inaad biyo raaciso. Biyo raaci. Intaas waxaa sii dheer, isticmaaluhu wuxuu sameyn karaa codsiyo qaas ah sida "Igu shub hal koob oo biyo ah" qasabadda ayaa si otomaatig ah ku sameyn doonta calaamadaha.
Qubeyska App-ka Qolka Musqusha Oo Dhan
TOTO waxay u furtay barnaamijka musqusha ee suuqa Japan bishii Sebtember 1, iyagoo taageeraya alaabada lagu shaqeyn karo barnaamijka la socda, sida adeegsiga barnaamijka si loo xakameeyo qolka qubeyska si loo iskiis isu nadiifiyo ka hor intaadan guriga aadin, shidida kuleylka goor hore, biyo daadinta. hore, iwm, iyo sidoo kale dejinta hawlgallo gaar ah oo si toos ah loogu fuliyo waqtiyo cayiman. Waxaa lagu soo warramey in tiro ka mid ah taxanaha musqusha guud ee TOTO ay xakamayn karaan APP ama kantaroolka fog ee u dhigma.
NITTO CERA, oo ah shirkad musqusha ka dhisan oo laga leeyahay Japan, ayaa dhawaan soo saartay wax soo saar casri ah oo loo yaqaan "omu", kaas oo lagu ridi karo haanta musqusha si loo dareemo isticmaalka biyaha ee musqusha oo ay uga muuqato barnaamijka mobilada waqtiga dhabta ah. Si aad u isticmaasho barnaamijka, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto abka aaladda waalidiintaada iyo taleefoonnadaada, iyadoo taleefanka waalidkaaga uu yahay gudbiye, taleefankaagana uu yahay kan wax qaata. Shayga ayaa sidoo kale soo saara taariikhda musqusha si loo sawiro tirada jeer ee qofku isticmaalay musqusha, iyo sidoo kale u sheegista isticmaalaha dhamaadka maalinta sida maalintaasi u dhacday.
Roob Maydho Firfircoon Oo Smart
Qubeyska cusub ee gacmeedka 'Grohe Smart Activated Hand Shower' waa fududahay inuu udhaxeeyo Roob qabow qabow, Raaxo Smart firfircoon iyo Radical leh kontaroolada dhinaca dambe, waxaana lagu heli karaa cabirro dhan 130mm ama 150mm. Roob iyo iftiin labadaba, shaqada qufulka dhaqsaha badan ee Grohe ayaa kaa hor istaageysa inaad mar kale qoyso, faahfaahin yar oo kaa dhigi doonta inaad fiicnaato sidoo kale.
Nidaamka Qubayska Nebia
Nidaamka Roob-biyoodka cusub ee 'Moen' ee dhawaan la bilaabay, kaas oo adeegsada tikniyoolajiyad lagu buufiyo walxaha qarxa si loo abuuro laba jeer daboolista biyaha iyada oo loo marayo atomization, ayaa awood u leh in uu badbaadiyo ilaa 45% oo biyo ah marka loo barbar dhigo qubeyska caadiga ah. Isticmaalayaasha ayaa dhaqaajin kara qubeyska kor iyo hoos si ay ugu haboonaadaan dherer kala duwan iyo caadooyin qubays, iyo daloolka diyaaradda derbiga ayaa bixiya khibrad u eg dalxiis. Badeecaddu waa mid deegaanka u roon oo qaab-diiradda saareysa, oo leh qaab wareeg ah oo farsamo iyo mustaqbalba leh, taasoo ka dhigaysa waayo-aragnimo raaxo badan oo raaxo leh marka loo eego madax dhaqameedka dhaqameed.
Astaanta musqusha ee Mareykanka Bradley ayaa dhowaan soo saartay badeecad isku daraysa saabuun, gacmo dhaqashada iyo shaqeynta qalajinta mid mid, waxayna ugu magac dartay WashBar. Ficil kasta wuxuu ku qalabeysan yahay astaamo u dhigma iyo tilmaamayaasha LED, oo leh naqshad guud, soo bandhigaya dareen buuxa oo tiknoolaji ah.
BOZZ Taxanaha qasabada
Kludi wuxuu casriyeeyay noocyadiisa kala duwan ee 'BOZZ' sanadkaan, markale wuxuu hoosta ka xariiqayaa khadadka fudud iyo saamiga caadiga ah ee qasabadaha si loo gaaro isku dheelitirka saxda ah iyo khafiifinta. Qasabadda waxaa laga heli karaa seddex meelood oo dhaadheer oo u dhigma dooxooyinka kala duwan, halka fidinta caatada ah ee qaabka darbiga lagu dhejiyo ay sii kordhineyso jawiga xarrago leh ee booska iyo qaab nololeedka. Ururinta cusub ee 'BOZZ' waxay leedahay dusha sare ee matte obsidian madow ah oo leh qaab jilicsan oo jilicsan oo dhammaystiran oo qarinaya iftiinka birta qabow, oo keenaya dareen qarsoodi ah iyo diirimaad.
Ururinta Central Park West
Kallista, oo ah nooca tuubada-dhamaadka sare ee Kohler, ayaa bilaabaya aruurinta "Central Park West" deyrta, oo ay ku jiraan wax walba min qasabadaha ilaa suumanka. Naqshadeeyayaasha ayaa si ula kac ah uga weeciyay faahfaahinta walxaha taariikhiga ah, sida horaantii qarnigii 20-aad wax soo saar, waxayna ku hagaajiyeen inay ku habboon yihiin aruurinta. Xarfaha C iyo H, oo matalaya biyo kulul iyo qabow, ayaa lagu ballaariyay labada gacmood si loo xoojiyo feejignaanta faahfaahinta.
Qolka Musqusha, Weelka lagu dhaqo
Antheus Qolka Musqusha
Villeroy & Boch ayaa dhawaan xarigga ka jaray taxanaha golaha musqusha ee Antheus, taas oo ah badeecada caadiga ah ee loo yaqaan 'Bauhaus style' oo diiradda saareysa fududaanta iyo wax ku oolnimada. Isla mar ahaantaana, waa badeecad ka turjumeysa raaxada, oo bixisa awood ballaaran, meel lagu kaydiyo qaybo badan, oo lagu keydin karo dahabka, qurxinta iyo walxaha kale. Marka lagu daro armaajooyinka musqusha, ururinta Antheus sidoo kale waxaa ku jira saxamada, musqulaha iyo muraayadaha.
Waqtiga markii jahwareerka guriga ee caamka ahi uu adduunka oo dhan marayo, sumadda musqusha Jarmalka ee HEWI ayaa mar kale soo bandhigtay fikrado cusub oo ku saabsan u-habeynta musqusha, iyaga oo bilaabaya badeecooyin weel casri ah. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan qalabyada iyadoo loo eegayo baahida shaqsiyeed, oo ay ku jiraan xirmooyinka tuwaalka, qaansooyinka, iwm, si loo hubiyo in walxaha caadiga ah ay ku dhow yihiin. Intaa waxaa dheer, naqshadeynta caatada ah ee weelka ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan ee sheygan.
Housetec, oo ah shirkad jikada iyo musqusha u ah Jabbaan, ayaa dhawaan soo saartay MK Series, oo ah badeecad isku dhafan miisaska jikada iyo armaajooyinka musqusha mid, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​raaxaysiga xitaa meelaha yaryar. Shayga cusubi wuxuu kaloo bixiyaa ikhtiyaarro habayn badan leh, sida muraayad muraayad ama shelf u ah alaabada yaryar. Albaabada sidoo kale waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan si ay ugu habboonaato jikada ama meelaha musqusha ee kala duwan.
Golaha Musqusha ee Lodloyd
Musqusha Bravat alaabooyin cusub ayaa la bilaabay 2020, muuqaalka cirro cirridka si loogu biiro midabada isku dhaca xargaha dahabka qurxinta, xarrago leh iyadoon lumin moodada. Nidaamka u hoggaansamida adag ee heerarka deegaanka ee qaranka E1, golaha wasiirrada waxaa laga sameeyaa qoryo adag oo lakabyo kala duwan leh, daaweynta xarkaha melamine, oo si wax ku ool ah u dheereyn kara nolosha qolka musqusha ee alwaaxa; golaha wasiirada ee darbiga ku dheggan oo naqshadeynta naqshadeynta, meel qoyan oo go'doon ah, fududahay in dhulka la xoqo; 1250 darajo heerkulka sare ee ceelasha dhoobada dhoobada, dhalaalka dhalaalka iyo nadiif ahaanta, ma fududa in la wasakheeyo; muraayad qeexan oo sare sawir muuqaal ah, xikmad leh oo loogu talagalay meel bannaan oo ka dambeysa muraayadda, kaydinta jilicsan, fiican iyo nadaafadda.
Qolalka taxanaha S400
Qaabdhismeedka Jabbaan wuxuu ku fiicanyahay abuurista qurux aan qurux badnayn iyada oo loo adeegsanayo si fudud oo iftiinka iyo hooska ah, iyo INAX Inax S400 taxane taxane ah ayaa farshaxankan u keenaya goobta musqusha. Suuliga suulku wuxuu ka kooban yahay INAX Inax gaar u ah tiknoolajiyada dhoobada ah ee loo yaqaan "Water Porcelain Super Clean", oo leh dusha sare ee siman, xoqida u adkeysata si looga hortago sameynta miisaanka iyo wasakhda, waxayna u baahan tahay kaliya nadiifin maalinle ah oo fudud, sidaa darteed waxay noqon kartaa mid ifaya cusub; naqshadda berkedda ayaa si weyn u adeegsanaysa laba jibbaaran oo wareegsan "gooladaha aadanaha". “Abuuritaanka geesaha wareegsan, kor u qaadka amniga musqusha; Nidaamka qubeyska wuxuu ka kooban yahay qubeyska kore iyo qubeyska gacanta, muuqaalka dusha jilicsan oo xoogaa kacsan, aadna u fududahay in la isticmaalo, kaliya xakamee qasabada, waad hagaajin kartaa qadarka socodka biyaha iyo heerkulka. Halkan riix si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah: S400 Suite - Iskudhafka iftiinka iyo hooska.
Sannadihii ugu dambeeyay, Lixil wuxuu riixayay musqulaha SATO ee suuqyada Koonfur-bari Aasiya iyo Afrika si looga caawiyo dadka ku nool gobolladaan dhibaatooyinka musqusha. Sannadkan, Lixil wuxuu ku dhisayaa guushaas qasabadda 'SATO', oo loo malayn karo inay tahay xarun gacmo-dhaqasho cusub oo qolka loogu talagalay saabuun, tixraacna oof-wareenka neo-coronary ee uu Lixil leeyahay waxaa looga hortegi karaa iyadoo gacmaha si fiican loogu xoqdo saabuun iyo tixraaca xogta UNICEF ee ah in boqolkiiba 40 dadka adduunka ku nool aysan haysan tas-hiilaad dhaqida asaasiga ah ee guriga. Daahfuray badeecadan.
Hore:: Waxaa Jira Wax Lagu Sheegayo Rakibaadda Muraayadda Musqusha! Ma Ogtahay Maxay Tahay Next: Xulidan Golaha Qolka Musqusha, Marnaba haka qoomamayn inaad iibsato!